Mpampianatra Ambony Lavitra dia Lavi-Toerana Mitady ny Fomba Iarovana ny Harem-Bakoka Fahagolan’i Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2017 14:16 GMT
Hagara, sarivongam-behivavy sy soratra Syriaka, manodidina ny taona 150 taorian'i Jesoa Kristy (Nampindramin'ny Toeram-Pahatsiarovana Ady Aostraliana). Dindon'ny Lohalambom-pandresena ao Palmyra: Sary avy amin'ny fahatsaram-pon'ny mpisera Flickr GothPhil (CC BY-NC-ND 2.0)
Enin-taonan'ny ady, sarotra ny tsy haka sary an-tsaina ilay firenena anatin'ny faharavana tanteraka rehefa ho avy ao Syria ihany ny fandriampahalemana. Tahaka ny asa tsy voavisavisa ny fanorenana indray taorian'ny fandripahana sy ny famotehana.
Fa any ambadiky ny sehatra any, efa eo am-piasana amin'ny fanavotana amin'ny sisan'ny vakoka fahagolan'i Syria sahady ireo arkeôlôgy sy ireo manampahaizana ambony manerana izao tontolo izao.
Anisan'ny fanamby atrehana amin'ny fitehirizana ny vakoka ao Syria ny varotra tahiry fahagola tsy ara-dalàna. Maro amin'ireo vondrona nifanandrina tamin'ny ady an-trano Syriana no nanakimpy ny masony tamin'izany varotra izany na nandray anjara koa aza, indrindra fa ny ISIS (Daesh) sy ny fitondran'i Assad. mametraka izany fa tsy ho mora ny vahaolana amin'izany haben'ny krizy Syriana izany.
Saingy lavitra dia lavitra an'i Syria kosa, misy oniversite iray miezaka ny manolotra izay rehetra mety ho karazam-bahaolana
Mampiatrano fampirantiana mifantoka amin'izany fanamby sarotra izany indrindra ny Mozean-Javakanton'ny Oniversiten'i Melbourne. Mitrandraka ireo telopolo taona nanaovana fikarohana teny an-kianjan'i Syria nataon'ny Oniversiten'i Melbourne ny Syria: Tantara Fahagola – Fifandirana Maoderina (سوريا: التاريخ القديم – الصراع الحديث) ao anatin'izao ady anjakan'ny faharavana izao.
Fitaovana Arkeôlôjika. Sary ambony nahazoana alalana avy amin'i Andrew Jamieson. Ny sary ambany avy amin'ny mpanoratra.
Ankoatra ireo zavatra maro, dia hita ao amin'ny fampirantiana ihany koa ireo rakitra fitaovana arkeôlôjika sy fitaovana fandraketana isan-karazany. Manandanja ara-tantara ny sasany amin'ireo zavatra sy fitaovana ireo.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny rehetra mitondra izany lohateny izany ihany, niverina tamin'ireo taona ampolony maro nataony tamin'ny lohasahan'ny reniranon'i Eofrata tany amin'ireo toerana tahaka an'i El Qitar, Tell Ahmar, Jebel Khalid ary i Tell Qumlug ny Professor Andrew Jamieson, mpampianatra ambony amin'ny resaka arkeôlôjian'i Afovoany Atsinanana ao amin'ny Sekoly Ara-Tantara sy Filôzôfika.
Sahan'asan'ny Oniversiten'i Melbourne – Syria. Sarin'ny mpanoratra tamin'ny fampirantiana
Talohan'ny ady, efa nandray anjara tamin'ny fikarakarana ireo angona goavana efa nisy i Jamieson. Tamin'ny taona 2010, narafitra ny fiaraha-miasa fantatra amin'ny anaran-tetikasa hoe Fikarohana Ara-Tantara sy Arkeôlôjika Syriana sy Aostraliana hametrahana lahatahiry tao amin'ny Tanànamandan'i Qal'at Najm ao Syria. Nosoritany nandritra ny valan-dresaka ny maha-iankinan'ny ain-dehibe ny famokarana fitaovana [dôsie] amin'ny teny arabo.
Jery an'i Qal'at Najm avy any atsimo. Saripikan'i Hovalp via Wikipedia. CC BY-SA 2.0
Notsiahiviny ihany koa ny asan'ny SHIRĪN, sampan-draharaha iraisampirenena iray izay mikendry ny fanolokoloana sy ny fiarovana ireo toerana, tsangambato [toerana manandaza] na mozea Syriana. Natsangana tamin'ny taona 2014, niezaka ny handrakitra sy hanombana ireo fahasimbana nolazaina taminy ity sampan-draharaha ity. Misy ireo mpampianatra ambony miahiahy fa kely fotsiny ny zava-bita na dia nisy aza ny fahazoan-dalan'ny vahiny miisa 140 handavaka hikarohana vakoka talohan'ny nisian'ny ady.
Nosoritan'ny Profesora Jamieson fa tena iankian'ny ain-dehibe tokoa ny mbola hirotsahan'ireo manana fahazoan-dalana. Ny asa tahaka ny fanakaramana mpiambina ireny toerana ireny, ohatra, raha azo atao no “tsipika farany fiarovana”.
Tamin'ny fanolorana lahateny tamin'ny TEDxBern tamin'ny taona 2016, nasongadin'i Cynthia Dunning Thierstein, Mohamad Fakhro ary Mohamed Alkhalid ihany koa ny ezaka vitan'ny SHIRĪN. Nohazavain-dry zareo fa tena zava-dehibe tokoa io asa io hiarovana ny fahamendrehana Syriana sy ny mari-panondroana ara-kolontsain-dry zareo :
Fanamby, vahaolana ary fifanoheran-kevitra
Goavana ny fanamby: ny fanimbana fanorenana goavana ankitsirano nataon'ny ISIS, nolazain'ny gazety fatratra; ny fandrobana ankapobeny nataon'ireo vondrona isan-karazany, amidy any amin'ny tsena iraisampirenena; fahasimbana mihatra amin'ny tsy mpandray anjara ateraky ny fandarohana baomba nataon'ny fitondran'ny Assad na ny mpioko; eny fa na dia noho ny tsy firaharahiana tsy azo nialana loatra aza.
Mbola iadian-kevitra ny vahaolana sasany ary mitana anjara toerana lehibe ny arkeôlôjia nomerika. Niteraka fanahiana, ohatra, ny dindon'ny Lohalambom-Pandresen'i Palmyra natsangana tao Londra tamin'ny taona 2016. Araka ny nolazain'ny Profesora Jamieson, misy ny fanahoana amin'ny mety hahalasa “Disneyland nomerika” ireo toerana angadiana raha aorina amin'ny toerana nisy azy tamin'ny voalohany ireny dindo ireny.
Miresaka ireny fanahiana sasany ireny ny lahatsary manaraka avy amin'ny The Guardian. Mandresy lahatra ireo ekipa mpanaingo ny dindo (replica) ao amin'ny Ivontoeran'ny Arkeôlôjia Nomerika fa :
Tsy tokony avelantsika ho ireo vondrona tsy tia no hamaritra ny tokontanin-kolontsain'ny fanjakana, firenena amin'ny toerana tsirairay. […] Tsy any amin'ny tokony na tsy tokony hanao dindo izahay no olana. Ny tena olana dia ahoana no handikanay na hanangananay ny dindo.
Nanoratra taorian'ny nambaboan'ny ISIS voalohany na fanindroany an'i Palmyra, nanavatsava ny sasany amin'ireo olana tao amin'ny tranonkalam-panadihadiam-baovao The Conversation i Emma Cunliffe avy ao amin'ny Oniversiten'i Oxford:
Betsaka ny mihevitra fa tsy tena ahazoana ny maha-tena izy ny rafitra ôrizinaly iray ny pirinty amin'ny refitelo [3D] ary manangana mihoatra kely ny fanaDisney-avana ny vakoka. Soritan-dry zareo ihany koa fa mbola mitohy ny ady : Syriana 370 000 no maty, an-tapitrisany no nafindra toerana, ary angamba 50 % ka hatramin'ny 70 % amin'ny tanandehibe manodidina no potika. Noho ny filàna fanavotana mahaolombelona manery, dia ny fanamarinan-toerana ihany aloha izao no tokony ho laharam-pahamehana.
Anisan'ny lohahevitra noresahin'ny Profesora Jamieson ny anjara toerana sy andraikitry ny arkeôlôgy, ary tolo-keviny ny hametrahana Sata Etika ahafahana miroso [manova zavatra].
Ary tena zava-dehibe indrindra izany raha jerena ny loza mety hihatra amin'ny arkeôlôgy syriana. Niteraka alahelo lalina tamin'io vondron'asa io tokoa manko ny fahafatesan'i Khaled al-Asaad, arkeôlôgy syriana malaza, teo ampela-tanan'ny ISIS tamin'ny taona 2015. Novonoina ho faty i Al-Asaad noho ny mety ho fandavany hamoaka ny toerana namindrana ireo zavatra mila narovana.
Farany, sarotra ny tsy hiray hevitra amin'ity fehintenin'i Emma Cunliffe momba an'i Palmyra ity, izay azo ampiharina amin'i Syria iray manontolo :
Mazava tsara aloha : raha mety hanana dikany lehibe ho an'izao tontolo izao i Palmyra, dia tokony ho an'izay niaina teo akaikiny, nikarakara azy, nitantana azy, niady ho azy isan-taranaka izany hoe ho an'ny vahoaka syriana ny fanapahan-kevitra farany.